Ogow sababta ay carruurta dunida ku dhalata ugu badan yihiin wiilal, marka la weynaadana ay dumarka u badan yihiin | Bakool.net
Home / ARIMAHA BULSHADA / Ogow sababta ay carruurta dunida ku dhalata ugu badan yihiin wiilal, marka la weynaadana ay dumarka u badan yihiin
Waa arrin ku saabsan heerarka nolosha bani’aadamka
Sheekada ugu horreysa ee la xiriirta heerarka nolosha bani’aadamka ayaa ah in haddiiba la doonayo iney isla ekaadaan tirada ragga iyo dumarka ee qaan gaarka ah, markaas loo baahanyahay iney dhashaan wiilal ka badan gabdhaha.
Waxaa la sheegaa in carruurta labka ah ay u dhowdahay iney dhimashada uga badnaadaan kuwa dhadigga ah, inta ay carruurnimada ku jiraan – marka la eego shilalka, khatarta ay carruurta iskugu keenaan gacmahooda, is dilitaanka iyo dhibaatooyinka kale ee caafimaadka.
“Da’ kasta, ku dhawaad wakhti walba iyo meel kastaba, ninka ayay u badantahay inuu ka hor dhinto haweeneyda”, waxaa sidaas yiri Barfasoor David Steinsaltz, oo bare ka ah jaamacadda Oxford.
Previous: Liverpool oo ku guuleesan doonta Horyaalka, Saadaashada Primer League Iyo koox walba booska ay gali doonto.
Next: Madaxweynaha Koofurgalbeed Laftagareen oo la kulmay wafdi ka socda UNSOM